Книга "One shot Collection"
စိတ်ကူးပေါ်တိုင်းရေးမိသော တစ်ခန်းရပ်များ Perfect wish - လူသားနှင့် လူသားမဟုတ်သူတို့ရဲ့ ဒဏ္ဍါရီထဲမှ ဆုတောင်းတစ်ခု The real us (1) - ကိုယ့်အဖေရဲ့မွေးစားသားကို ခိုးပြေးမိတဲ့ သားအရင်းတစ်ယောက် အမွေပြတ်စွန့်ပစ်ခံရသောအခါ The real us (2) - ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံဖို့ခက်နေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ရဲ့သားအရင်းက ကိုယ့်ကိုခိုးပြေးသွားခဲ့သောအခါ 🚨The Most🚨 - (၁၉)နှစ်သားချာတိတ်က အဖေဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းပါတနာ (၃၃)နှစ်အရွယ်ဦးကိုမှ တန်းတန်းစွဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်သည်ဘဝ ဖူးစာမှန်၏၊ မမှန်၏ - သူမသိပ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဝေဒနာတွေကို အစားထိုးခံစားပေးခဲ့တဲ့သူမနဲ့ သူတို့ရဲ့ဖူးစာဖက်များ ¤ စိတျကူး​ပျေါတိုငျး​ရေးမိ​သော တဈခနျးရပျမြား Perfect wish - လူသားနှငျ့ လူသားမဟုတျသူတို့ရဲ့ ဒဏ်ဍါရီထဲမှ ဆုတောငျးတဈခု The real us (1) - ကိုယျ့အဖရေဲ့မှေးစားသားကို ခိုးပွေးမိတဲ့ သားအရငျးတဈယောကျ အမှပွေတျစှနျ့ပဈခံရသောအခါ The real us (2) - ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုကို လကျခံဖို့ခကျနတေဲ့ ကြေးဇူးရှငျရဲ့သားအရငျးက ကိုယျ့ကိုခိုးပွေးသှားခဲ့သောအခါ 🚨The Most🚨 - (၁၉)နှဈသားခြာတိတျက အဖဖွေဈသူရဲ့လုပျငနျးပါတနာ (၃၃)နှဈအရှယျဦးကိုမှ တနျးတနျးစှဲပွီး တညျဆောကျခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့အိမျထောငျသညျဘဝ ဖူးစာမှနျ၏၊ မမှနျ၏ - သူမသိပျခဈြတဲ့မိနျးကလေးရဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျဝဒေနာတှကေို အစားထိုးခံစားပေးခဲ့တဲ့သူမနဲ့ သူတို့ရဲ့ဖူးစာဖကျမြား
Perfect Wish (ဇော်ဂျီ) The real us (1): I wanna know the real you (ဇော်ဂျီ) The real us (2): You don't know the real me (ဇော်ဂျီ) The Most (+) (ဇော်ဂျီ) ဖူးစာမှန်သည် မမှန်သည် Perfect Wish (ယူနီကုတျ) The real us (1): I wanna know the real you (ယူနီကုတျ) The real us (2): You don't know the real me (ယူနီကုတျ) The Most (+) (ယူနီကုတျ) ဖူးစာမှနျသညျ မမှနျသညျ
စိတ်ကူးပေါ်တိုင်းရေးမိသော တစ်ခန်းရပ်များ Perfect wish - လူသားနှင့် လူသားမဟုတ်သူတို့ရဲ့ ဒဏ္ဍါရီထဲမှ ဆုတောင်းတစ်ခု The real us (1) - ကိုယ့်အဖေရဲ့မွေးစားသားကို ခိုးပြေးမိတဲ့ သားအရင်းတစ်ယောက် အမွေပြတ်စွန့်ပစ်ခံရသောအခါ The real us (2) - ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံဖို့ခက်နေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ရဲ့သားအရင်းက ကိုယ့်ကိုခိုးပြေးသွားခဲ့သောအခါ 🚨The Most🚨 - (၁၉)နှစ်သားချာတိတ်က အဖေဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းပါတနာ (၃၃)နှစ်အရွယ်ဦး...
27 ч. 27 мин.
Perfect Wish (ဇော်ဂျီ)
The real us (1): I wanna...
The real us (2): You don'...
The Most (+) (ဇော်ဂျီ)
Perfect Wish (ယူနီကုတျ)
Бета тест. Новый мир.